Wafti Sare Oo Ay Horkacayeen Madaxwaynaha DDSI Iyo Wasiirka Gaashaandhiga Itoobiya Ayaa Kormeer Hawleed Kugaadhay Gobolada Godey Iyo Qoraxey. - Cakaara News
Wafti Sare Oo Ay Horkacayeen Madaxwaynaha DDSI Iyo Wasiirka Gaashaandhiga Itoobiya Ayaa Kormeer Hawleed Kugaadhay Gobolada Godey Iyo Qoraxey.
Jigjiga(CN) Khamiis.Feb.05.2015, wafti sare oo ay horkacayeen madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar iyo wasiirka wasaarada gaashaandhiga Itoobiya mudane Siraj Fegaysa ayaa saaka ka anbabaxay xarunta magaalada Jigjiga islamarkaana ka dagay gagida diyaaradaha ee Godey halkaas oo si heer sare ah loogu soo dhaweeyay.
Waftigan oo isugu jiray madax sare iyo saraakiisha sare ee ciidanka qaranka iyo ciidamada gaarka ah ee Liyuu booliska ayaa waxaa kamida ahaa taliyiha guud ee koonfurta bariga Itoobiya L.General Abraham W/mariam, Jananka ciidamada gaarka ah ee Liyuuga mudane Cabdiraxmaan Cabdulaahi Buraale, iyo saraakiil sare oo kamida ciidanka qaranka Itoobiya.
Socdaalka waftiga oo ay ujeedooyinkiisu ahaayen indho-indhaynta mashaariicaha horumarineed, xadhig jarka qaar kamida mashaariicda dhamaatay, iyo qodobo kale iyadoo si heer qaran magaalada Jigjiga loogu dabaal dagayo horudhaca xuska qaran ee maalinta ciidanka qaranka Itoobiya oo markii 3aad laxusayo maalinta bari ah.
Waftiga ayaa ugu horayntii magaalada Godey kuyeeshay kulan balaadhan oo lagusoo bandhigayay waxqabadka hawlaha horumarineed ee warshada biraha iyo Injineeriga ee ciidanka qaranka iyo wakaalada hawlaha dhismaha biyaha ee DDSI oo si fahan buuxa leh u soo bandhigay mashaariicaha ay fuliyeen, halkaas oo ay kasoo qayb galeen madaxdii waftiga, odoyaasha iyo madaxdii hore ee deegaanka, iyo maamulka gobolka iyo maamulka magaalada Godey.
Shirkada biraha iyo Engineerikada ee ciidanka qaranka ayaa halkaasi kusoo bandhigtay dikumiintiyo isugu jiray qoraal iyo muuqaalo hawlaha horumarineed ee ay kaqabteen deegaanka iyo guud ahaanba dalka Itoobiya, waxaana kamid ahaa mashaariicdaasi mashruuca horumarinta waraabka ee Galbeedka Godey, mashruucah Harawo ee shiniile, iyo mashaariicda kale ee ay ka qabteen deegaanada Oromiya, Canfarta iyo Sh.koonfureed. Sidoo kale waxaa lasoo jeediyay waxqabadka iyo guulaha waawayn ee hawlaha biyaha iyo waraabka ee ay sameeyeen haayadaha deegaanku gaar ahaan wakaalada dhismaha hawlaha biyaha ee DDSI.
Waftiga oo isticmaalayay gaadiidka dhulka iyo cirkaba ayaa kulankaasi kadib markii ay qadeeyeen soo indha indha-indheeyay mashruuca horumarinta waraabka ee galbeedka Godey iyo biyo xidheenka, halkaas oo aad loo bogaadiyay shaqada iyo isbadalka taariikhiga ah ee laga qabtay. Intaas kadib ayuu waftigu u kicitimay dhanka gobolka Qoraxeey waxaana xadhiga laga jaray qaar kamida mashaariicaha iyadoo uu waftigu kuwo kalena oo kormeeray.
Madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar iyo wasiirkii wasaarada gaashaandhiga DFI mudane Siraj Fegaysa ayaa siwada jira xadhiga uga jaray mashruuca dhismaha xarunta qaybta labaad ee bariga Itoobiya ee ciidanka qaranka oo ahayd G+4. Mashruucan ayaa wuxuu kamid yahay mashaariicaha badan ee ay dhiseen wakaalada dhismaha, iibka iyo adeegayada gaarka ah ee Booliska.
Xafladan oo ahayd mid si qurux badan loo soo agaasimay ayaa waxaa aad u soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee shacabka magaalada qabridahar iyo maamulka gobolka iyo magaalada, waxaana halkaasi khudbad kasoo jeediyay madaxwaynaha DDSI oo uga mahad celiyay shirkada dhistay iyo shacabkii xafladaasi kasoo qayb galay. Xarunta cusub ee ciidanka ayaa hada kahor kutaalay magaalada qabridahar gudaheeda halka ay midan cusubi kasoo durugsantahay guadaha magaalada. Waftiga ayaa sidoo kale soo indha indheeyay mashaariicaha gagida diyaaradaha, TVET-ka iyo goobo kale.
Waftiga ayaa goordhaw soo gaadhay xarunta DDSI ee magaalada Jigjiga waxaana xaflad balaadhan oo casho-sharaf ah lagu diyaariyay barxada wayn ee guryaha martida ee Qaryaan Dhoodaan. Sida uu kusoo waramayo wariyaha CakaaraNews oo hada kusugan Qaryaan Dhoodaan waxaa lafilayaa in halkaasi barnaamijyo ama khudbado lagasoo jeediyo.
Dib ayaan idiinka soo gudbinaynaa wixii xog ah ee kusaabsan xaflada iyo guud ahaanba xuska qaran ee maalinta ciidanka qaranka Itoobiya oo si horu dhac ah loogu dabaal dagayo magaalada Jigjiga.